Bata Murefu, Bata Mupfupi Yonetsa muZanu PF – 263AfricaNews-Patrick_Manase
Zimbabwe, South Africa work on pension portability policy
Mugabe engages generals for war vets congress
Public Sector Corporate Governance Bill gives effect to the ZimCode
Bata Murefu, Bata Mupfupi Yonetsa muZanu PF
September 11, 2017 c263afri 0 Comments
Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato reZanu PF zvichitevera kushoropodzwa kwakaitwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, pamusangano wakaitirwa kuBindura neMugovera.
Vachitaura pamusangano wakaitwa nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nevechidiki kunhandare yeChipadze mudhorobha reBindura mukupera kwesvondo, mudzimai wemutungamiri wenyika, Amai Grace Mugabe, vakatsoropodza VaMnangagwa vachiti havafanire kuramba vakanyarara kana vatsigiri veZanu PF vari muchikwata chiri kuzvidaidza kuti Team Lacoste vachitsoropodza VaMugabe naivo Amai Mugabe.
Amai Mugabe vakati VaMnangagwa kana vakamira pachokwadi kuti vari kutsigira VaMugabe havafanire kuwanikwa vachishamwaridzana nevanhu vakadzingwa mumusangano wavo.
Ukuwo VaMugabe vakataura mashoko akaonekwa nevamwe sekunge anoti VaMnangagwa kuti vasvike pavari, pamusana pavo ivo VaMugabe.
VaMugabe vakati pakanga potsvagwa munhu aifanirwa kunge ari mukuru we security mubato muna 1976, VaMugabe vakaita kuti VaMnangagwa vatore basa iri kunyange hazvo vakanga vambosiya zvehondo vachienda kuchikoro.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, Muzvare Memory Kadau, vati VaMnangagwa vave patambo zvekuti vanogona kudzingwa muZanu PF chero ipi nguva.
Zvataurwa naMuzvare Kadau zvatsinhirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaMasimba Kuchera, avo vati VaMnangagwa havakwanise kupindura zvinenge zvataurwa naAmai Mugabe sezvo zvichiratidza kuti Amai Mugabe vane masimba akawanda pari zvino.
Amai Mugabe vakati havasi kufara nemashoko ari kubuda ekuti vari kuda kutora matomhu kubva kumurume wavo kana achinge asiya chigaro.
Asi Muzvare Kadau vanoti muitiro waAmai Mugabe uri kuratidza pachena kuti vari kuda masimba kunyange hazvo vachihwanda nemunwe.
VaKuchera vanotiwo mashoko aAmai Mugabe ekuti VaMugabe vakashevedza gurukota rinooona nezvekudzivirirwa kwenyika, VaSidney Sekeramayi, kuti vazotaura navo mushure mekurwara kwavakaita mushure mekunge vadya chikafu pavakanobata maoko kuManicaland zvichitevera kufa kwakaita murume wemutungamiri wedare reseneti, Amai Edna Madzongwe, kunoratidza kuti VaMugabe vari kuda kuti VaSekeramayi vatore matomhu kubva kuna VaMugabe.
Asi VaMugabe pachavo vanoti havasi kuzodoma munhu achatora matomhu kubva kwavari vachiti izvi zvichaitwa pamusangano wekongiresi yebato ravo sezvinotaurwa nebumbiro remitemo reZanu PF.
Vanhu vakawanda vanoti zviri kuitika muZanu PF zvinoratidza kuti bato iri harichina pfungwa dzekugadzirisa zviri kunetsa munyika zvakaita sekuwanira vanhu mabasa, kuwanikwa kwemari nezvimwe zvinokosha muhupenyu.
Dzimwe nyanzvi dzinoti zvose zvakataurwa kuBindura zvinhu zvaifanirwa kunge zvakataurwa mu Politburo yeZanu PF kwete kuzvifumura kwava kuyita bato iri richitaura zvinhu pachena zviri kunetsa.
Originally posted on VOA Shona
← Madzimai Owana Rubatsiro Rwekuita Mabhizinesi
WATCH: Robert Mugabe stunningly quashes ambitious wife Grace on issue of succession →
VaTsvangirai naVaNcube Voita Mushandirapamwe
April 20, 2017 c263afri 0
MaWarriors naManyuchi Chete Ndivo Vanonzi Vakasimudza Mureza weNyika muna 2016
December 30, 2016 c263afri 0
December 12, 2016 c263afri 0